လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း: ၂၀ လီတာဆံ့သော ပုလင်းပေါင်း ၃၀၀ ကို တစ်နာရီအတွင်း ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အခမဲ့ တပ်ဆင်ပေးသည်။
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAQGF 300
VAQGF 3003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine withacapacity of 300 jars of 20 litres per hour, suitable for businesses that produce pure bottled water.
The product is manufactured using the most modern filling technology of the United States. With3automatic stages, businesses will savealot of production costs, meanwhile productivity is increased many times compared to conventional types of filling machine.
Viet An General Trading Joint Stock Company is the market leader in importing and distributing genuine 20-liter jar filling and capping machine imported from abroad.
VAQGF 300 စက်သည် တစ်နာရီအတွင်း ၂၀ လီတာဆံ့သော ပုလင်းပေါင်း ၃၀၀ ကို ဖြည့်ပေးနိုင်သောကြောင့် ရေသန့်ဘူးထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်းအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို U.S ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတယ်။ အော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျှော့ချနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားစက်တွေနဲ့စာရင် ဒီစက်က ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားလည်း ပိုမြင့်ပါတယ်။
Viet An General Trading Joint Stock Company သည် နိုင်ငံတကာမှ တင်သွင်းသော အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသော စက်များကို တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးတဲ့ ဈေးကွက်မှာ ဦးဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
With the durability of more than 20 years, fast and accurate filling speed, the machine helps businesses to increase productivity, increase competitiveness in the market. Viet An filling and capping machine is supplied to the market with the lowest price, therefore; all kinds of filling machines supplied by Viet An are trusted by customers!
ဒီစက်ဟာ အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာတဲ့အထိ အသုံးပြုလို့ရပြီး လျင်မြန်မှန်ကန်တဲ့ လောင်းထည့်ခြင်းအရှိန်ကြောင့် ပစ္စည်းတွေ များများထုတ်လုပ်နိုင်လို့ ဈေးကွက်မှာ အားပြိုင်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Viet An ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်တဲ့ အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်တွေကို ဈေးကွက်မှာ အချိုသာဆုံး ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်လို့ customer တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားပါတယ်။
Advantages of VAQGF 3003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine
3 in 1 အျောတိုလောငျးဖွညျ့ပေးပွီး အဖုံးတပျပေးသောစကျ VAQGF 300 ရဲ့ ကောငျးကြိုးမြား
VAQGF 3003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine is compact, durable and easy to operate
VAQGF 3003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine with fully automatic control system imported from Korea, Japan
Filling process ensures food hygiene and safety for bottled water
VAQGF 300 3-in-1 automatic jar filling and capping machine is manufactured using the most modern U.S. jar filling technology.
All components of the machine are made of 304 stainless steel
Automatically stop whenaproblem arises.
Machine runs smoothy, low noise
Machine assembly process ensures ISO 9001: 2015 standard.
VAQGF 300 3-in-1 automatic jar filling and capping machine applies technology to minimize power consumption
Technology application saves maximum power consumption
Installation cost is free in Vietnam
VAQGF 3003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine hasa1-year warranty and long-term maintenance
3 automatic stages will save the cost of hiring5employees and pay back capital invested after 1 year
3 in 1 အျောတိုလောငျးဖွညျ့ပေးပွီး အဖုံးတပျပေးသောစကျ VAQGF 300 စကျက သိပျသညျးကဈြလဈြတယျ။ကွာရှညျခံတယျ။ လှယျကူစှာလညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
တဈခုခုမှားယှငျးသှားတဲ့အခါ အျောတိုပိတျသှားတဲ့ ထိနျးခြုပျစနဈလညျး ပါဝငျပါတယျ။
အပွညျ့အဝ အျောတိုထိနျးခြုပျပေးတဲ့စနဈပါတဲ့3in 1 အျောတိုလောငျးဖွညျ့ပေးပွီး အဖုံးတပျပေးသောစကျ VAQGF 300 ကို ကိုရီးယားနဲ့ ဂပြနျမှ တငျသှငျးထားပါတယျ။
လောငျးထညျ့ခွငျးလုပျငနျးက အစားအသောကျသနျ့ရှငျးရေးနဲ့ ရဘေူးတှရေဲ့ လုံခွုံမှုကို သခြောစပေါတယျ။
3 in 1 အျောတိုလောငျးဖွညျ့ပေးပွီး အဖုံးတပျပေးသောစကျ VAQGF 300 ကို U.S ရဲ့ ခတျေအမီဆုံး လောငျးထညျ့ခွငျးစနဈနဲ့ ထုတျလုပျထားပါတယျ။
စကျရဲ့ အစိတျအပိုငျးတှေ အားလုံးကို 304 အစှနျးခံသံမဏိနဲ့ ပွုလုပျထားတယျ။
ပွသနာတခုခုပျေါပေါကျလာရငျ စကျက အလိုလိုရပျတနျ့သှားမှာ ဖွဈတယျ။
စကျက ဆူညံမှု မဖွဈးစေဘဲ ခြောခြောမှမှေ့ေ့ လညျပတျပါတယျ။
စကျအစိတျအပိုငျးတပျဆငျခွငျးတှကေလညျး ISO 9001:2015 စံနှုနျးနဲ့ ကိုကျညီတယျ။
3 in 1 အျောတိုလောငျးဖွညျ့ပေးပွီး အဖုံးတပျပေးသောစကျ VAQGF 300 ကို ပါဝါစားနညျးစတေဲ့ နညျးပညာနဲ့ ထုတျလုပျထားတယျ။
နညျးပညာကွောငျ့ ပါဝါအမြားကွီးကုနျမှုကို လြှော့ခနြိုငျတယျ။
ဗီယကျနမျနိုငျငံအတှငျး တပျဆငျခ အခမဲ့ဖွဈတယျ
3 in 1 အျောတိုလောငျးဖွညျ့ပေးပွီး အဖုံးတပျပေးသောစကျ VAQGF 300 က ၁ နှဈအာမခံဖွဈပွီး ကွာရှညျခံတဲ့ ပစ်စညျးဖွဈတယျ။
အျောတိုလုပျဆောငျတဲ့ အဆငျ့ ၃ ဆငျ့ကွောငျ့ အလုပျသမား ၅ ယောကျထိ လြှော့ခနြိုငျပွီး ၁ နှဈပွီးတဲ့အခါ အရငျးပွနျရနိုငျပါတယျ။
3 automatic stages of VAQGF 3003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine
VAQGF 300 လောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်၏ အော်တိုလုပ်ဆောင်သော အဆင့် ၃ ဆင့်
Stage 1. Automatic cleaning: The cleaning stage includesachain conveyor, jar holder, conveyor motor, 304 stainless steel pressure pump.
After 20-liter jars are decapped, the jars will be transferred to the automatic cleaning stage. The jars will be turned upside down and fixed by the holder unit. Conveyor motor operates inafixed direction to move the jar from the cleaning stage to the filling stage. High-class 304 stainless steel head pump system fills pure water and sterilized ozone into the jar. Dirt and bacteria attached to inside and outside the jar will be removed. The entire cleaning process takes place automatically, withacapacity of up to 300 20-liter jars an hour.
အဆင့် ၁: အော်တို သန့်ရှင်းခြင်း
ဒီအဆင့်မှာ သယ်ယူပေးတဲ့ စက်အစီအတန်းတစ်ခု၊ ပုလင်းတွေထည့်တဲ့ စက်၊ဘယ်ယူပေးတဲ့စက်မော်တာ၊ 304 အစွန်းခံသံမဏိ ဖိအားပြင်းရေစုပ်စက်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
၂၀ လီတာဆံ့တဲ့ ပုလင်းတွေကို အဖုံးခွာပြီးတဲ့အခါ သန့်ရှင်းရေးစက်ထဲကို ပြောင်းရွှေ့ပေးရပါမယ်။ပုလင်းတွေက ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ပုလင်းထည့်တဲ့စက်က ပြန်ပြီးစီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သယ်ယူပေးတဲ့စက်မော်တာက ပုလင်းတွေကို တိကျတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း သန့်ရှင်းပေးတဲ့စက်ကနေ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ဆီကို သယ်ယူပေးမှာဖြစ်တယ်။အဆင့်မြင့် 304 အစွန်းခံသံမဏိ ရေစုပ်စက်ခေါင်းက ပုလင်းတွေထဲသို့ ရေသန့်တွေနဲ့ ပိုးသတ်တဲ့အိုဇုန်းတွေကို ဖြည့်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ ပုလင်းအတွင်းအပြင်မှ အညစ်အကြေးနဲ့ ပိုးမွှားတွေကို ဖယ်ရှားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အဆင့်က အော်တိုလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး တစ်နာရီလျှင် ၂၀ လီတာ ဆံ့တဲ့ ပုလင်းပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Stage 2: Automatic filling: VAQGF 300 jar filling machine is designed with2filling heads. At this stage, pure water will be put into the jar according to the programmed norm through spring wire system combined with 304 stainless steel head pump system operating with pressure from 0.5-0.6 Mpa.
VAQGF 300 ကို ဖြည့်ပေးတဲ့ ခေါင်းနှစ်ခုနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ရေသန့်တွေကို ပရိုဂရမ်ရဲ့ စည်းမျဉ်းအတိုင်း စပရင်ဝါယာစနစ်နဲ့ ဖိအား 0.5-0.6 Mpa ရှိတဲ့ 304 အစွန်းခံသံမဏိ စနစ်တို့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ပုလင်းထဲသို့ ထည့်ရပါမယ်။
Stage 3: Automatic capping: The VAQGF 300 jar filling machine is equipped withacapping head suitable for small neckless 20-liter jars.
After the jar is filled with water at stage 2, it will be conveyed by the conveyor system to the automatic capping stage. At this stage, one capping head uses pressure to cap the jar. The machine will cap up to 300 caps into the jar per hour. The jar, after being capped, will haveahydraulic cylinder to push the water out
VAQGF 300 စက်မှာ လည်ပင်းသေးတဲ့ ၂၀ လီတာပုလင်းတွေအတွက် သင့်လျော်တဲ့ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက် တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ပုလင်းတွေကို ရေဖြည့်ပေးပြီးတဲ့အခါ သယ်ယူပေးတဲ့သက်က အော်တိုအဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်ဆီသို့ သယ်ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအဆင့်မှာ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ခေါင်းက ပုလင်းတွေကိုအဖုံးတပ်ဖို့ ဖိအားသုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်က တစ်နာရီကို အဖုံး ၃၀၀ ဖုံးပေးနိုင်ပါတယ်။အဖုံးတပ်ပြီးတဲ့ပုလင်းတွေမှာ ရေတွေကို အပြင်ထုတ်ဖို့ အရည်ဖိအားသုံးသော ဆလင်ဒါပါရှိပါတယ်။
Benefits of customers when buying3in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine VAQGF 300 of Viet An company
Viet An ကုမ္ပဏီရဲ့ အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ VAQGF 300 စက်ကို ဝယ်ယူလျှင် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
• Highly qualified technical experts will analyze and install the appropriate system for the VAQGF 300 3-in-1 automatic jar filling and capping machine.
• Viet An will advise and design the facility, advise on the filling machine production process as well as legal documents to save costs for customers.
• In addition, we also assist customers in designing and printing jar labels and connect customers with suppliers of plastic jars, shrink membranes ..., supporting the implementation of food safety registration papers as well as consulting and sharing business strategies.
• All this will be advised in detail when you buy and install the VAQGF 300 3-in-1 automatic jar filling and capping machine.
• With3automatic stages, VAQGF 300 jar filling and capping machine will help customers to haveamodern high-capacity automatic water filling line, save the cost of hiring from3to5workers, meanwhile labor efficiency is always guaranteed
• The machine is designed to operate continuously with durability over 15 years
• ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ VAQGF 300 စက်ကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး သင့်တော်တဲ့စနစ်ကို တပ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။
• Viet An မှ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အကြုံပြုပြီး ဒီဇိုင်းဆင်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ လောင်းထည့်ပေးတဲ့စက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ customer တွေ အကုန်အကျသက်သာစေမယ့် တရားဝင်စာချုပ်စာတမ်းတွေကို အကြုံပြုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ပုလင်းလေဘယ်တွေ ဒီဇိုင်းနဲ့ ပရင့်ထုတ်ခြင်း၊ပုလင်းတွေနဲ့ shrink membrane supplier တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊အစားအသောက်လုံခြုံရေးအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ စီးပွားရေး နည်းဗျူဟာတွေ ဝေမျှပေးခြင်း စသည်တို့လည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• VAQGF 300 ကို ဝယ်ယူတဲ့အခါ အပေါ်ကအချက်တွေ အားလုံးကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• စက်ရဲ့ အော်တိုအဆင့် ၃ ဆင့်ကြောင့် customer တွေက လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်တဲ့
• Auto လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ line ရရှိမယ်။အလုပ်သမား ၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်အထိ လျော့ချနိုင်မယ်။အချိန်တိုအတွင်း အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့လည်း အာမခံနိုင်တယ်။
• ဒီစက်ကို ၁၅ နှစ်ကျော် ကြာတဲ့အထိ အဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားတယ်။
Viet An General Trading Joint Stock Company is lowering the price as well as upgrading modern machines, warranty, quick maintenance so that you are at peace of mind when ordering at Viet An Company! Please contact today to own yourselfa3 in 1 VAQGF 300 automatic jar filling and capping machine, which has the highest quality in 2019.
Viet An General Trading Joint Stock Company က ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ရောင်းချပေးပြီး ခေတ်မီစက်တွေ၊အာမခံချက်တွေ၊လျင်မြန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှုတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားတာ ဖြစ်လို့ customer တွေကို စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ VAQGF 300 စက်ကို သင်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ယခုပဲ မှာယူလိုက်တော့နော်!!
Automatic stages – purchase separately (Optional)
VAQGF 300 jar filling machine is one of the most modern machines that Viet An has provided to the market. Besides the3automatic stages integrated into the machine, the machine is also compatibile with other auto parts. Therefore, customers can expand up to 12 automatic stages to createafully automatic filling line without labor costs.
Here are some automated steps that you can invest to integrate into the VAQGF 300 3-in-1 automatic jar filling and capping machine
VAQGF 300 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်က Viet An ကုမ္ပဏီမှ ဈေးကွက်မှာတင်သွင်းထားတဲ့ ခေတ်အမီဆုံးစက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အော်တိုအဆင့် ၃ ဆင့်အပြင် အခြားအစိတ်အပိုင်းများနဲ့လည်း အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် customer တွေက အလုပ်သမား ကုန်ကျစရိတ်တွေမကုန်ကျစေချင်တဲ့အခါ အပြည့်အဝအော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့စက်ဖြစ်ဖို့ အော်တိုအဆင့် ၁၂ ဆင့်ထိ တို့ချဲ့နိုင်ပါတယ်။
1. Semi-automatic decapping machine BG-600.
The design consists of 1 decapping head and frame system made of high quality 304 stainless steel. The machine can decap from 300 to 600 caps an hour.
Principle of operation of the semi-automatic decapping machine BG-600: The cap of the jar that needs to be removed is taken to the machine's decapping head. At this stage, under pressure from 0.6-0.8 Mpa, the cap will be removed from the jar. The jar cap will be separated intact without any deformities so that it can be reused.
ဒီစက်မှာ အဖုံးခွာတဲ့ ခေါင်းတစ်ခုနဲ့ အရည်အသွေးမြင့် 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖရိန်စနစ်တို့ ပါဝင်တယ်။ ဒီစက်က တစ်နာရီလျှင် အဖုံး ၃၀၀ မှ ၆၀၀ ထိ ခွာပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဝက်အော်တိုအဖုံးခွာပေးသောစက် BG-600 ရဲ့ စည်းမျဉ်းများ: အဖုံးခွာရမယ့် ပုလင်းကို အဖုံးခွာတဲ့ စက်ဆီသို့ ယူဆောင်သွားရပါမယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ပုလင်းတွေဆီက အဖုံးတွေကို 0.6-0.8 Mpa ဖိအားအောက်မှာ ခွာပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ ပုလင်းတွေကို ပုံစံမပျက်အောင်လုပ်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုဖို့ ခွဲထားမှာ ဖြစ်တယ်။
Specifications of semi-automatic decapping machine BG-600
တဝက်အော်တိုအဖုံးချွတ်ပေးသောစက် BG-600 ၏ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar / h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 300-600
Wash head(သန့်ရှင်းရေးခေါင်း) 1
Electricity supply(လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု) Use Air
Pressure (Mpa) (လေဖိအား) 0.6-0.8
Dimensions (LxWxH) (အတိုင်းအတာ) 500x750x1800
Weight / kg) (အလေးချိန်) 48
2. Automatic jar cleaning machine ST-300
This isamachine that applies the most modern cleaning technology in 2019. With intelligent control, it can operate the entire 20-litre jar cleaning process by itself. The frame of the machine is made of high quality 304 stainless steel, shiny surface, easy to clean and durable.
ဒီစက်ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး သန့်ရှင်းပေးခြင်း နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်စနစ်ကြောင့် ၄င်းက ၂၀ လီတာပုလင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းကို ၄င်းကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ စက်ရဲ့ ဖရိန်ကို 304 အစွန်းခံ သံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး တောက်ပတဲ့ မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သန့်ရှင်းဖို့ လွယ်ကူပြီး ကြာရှည်အသုံးခံပါတယ်။
The machine has3brushes, used to clean3jars at the same time. The brush can be rotated 180 degrees to wash all around the jar from its neck, body and bottom. The machine hasa304 stainless steel head pumping system to pump water to wash the jar. Each machine can wash from 300 to 600 20-liter jars.
ဒီစက်မှာ ပုလင်း ၃ လုံးကို တစ်ချိန်တည်း သန့်ရှင်းပေးလို့ရအောင် brush ၃ ခုပါဝင်ပါတယ်။ brush က ပုလင်းရဲ့ ခေါင်းပိုင်း၊လည်ပင်းနဲ့ အောက်ခြေတွေကို သန့်ရှင်းပေးဖို့ ၁၈၀ ဒီဂရီလှည့်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီစက်မှာ ပုလင်းကိုဆေးဖို့ ရေစုပ်ရန်အတွက် 304 အစွန်းခံသံမဏိ ရေစုပ်စက် ပါဝင်ပါတယ်။ စက်တိုင်းဟာ တစ်နာရီအတွင်း ၂၀ လီတာပုလင်း ၃၀၀ မှ ၆၀၀ အထိ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Specifications of ST-300 Automatic jar washing machine
Capacity (jar/h)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 250-300
Wash head (သန့်ရှင်းရေးခေါင်း) 3
Power (kw) (ပါဝါ) 1.2
Dimensions (LxWxH) (အတိုင်းအတာ) 1250x1100x1800
Weight / kg) (အလေးချိန်) 230
Price (USD) (အလေးချိန်)
3. BL-300 automatic jar loading machine:
With the design of2loading heads, at the same time, the machine can automatically load2jars intoaVAQGF3003in 1 jar filling machine. This helps businesses save production costs and increase labor efficiency.
The automatic loading machine BL-300 is also made of the highest quality 304 stainless steel with durability over 20 years.
ပုလင်းသယ်ဆောင်ပေးတဲ့စက်ခေါင်းနှစ်ခုပါတာကြောင့် ဒီစက်ဟာ VAQGF 300 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ထဲသို့ ပုလင်း ၂ ပုလင်းကို တပြိုင်နက် သယ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပြီး အလုပ်မြန်မြန်ပြီးမြောက်စေပါတယ်။
BL-300 စက်က အဆင့်အမြင့်ဆုံး 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် အနှစ် ၂၀ ကျော်တဲ့အထိ ကြာရှည်ခံပါတယ်။
Specifications of BL-300 automatic jar loading machine:
(အော်တို ပုလင်းသယ်ပေးသောစက် BL-300 ၏ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 300
Wash head(သန့်ရှင်းရေးခေါင်း) 2
Power (kw) (ပါဝါ) 0.55
Dimensions (LxWxH) (အတိုင်းအတာ) 1050x960x1200
Weight / kg) (အလေးချိန်) 40
4. Automatic cap loading machine CL-1200:
အော်တို အဖုံးသယ်ပေးတဲ့သက် CL-1200
With intelligent design, the cap can be automatically loaded, the cap is supplied to the capping unit in the 3-in-1 automatic jar filling and capping machine VAQGF 300. The cap-loading machine has 1 tray for the caps, after the workers load the caps on the tray containing the caps of the machine, the conveyor motor will operate and the cap will automatically be taken to the position of the capping heads. Especially with extremely modern design, the machine can automatically feed the caps. The cap is always fed in the right direction. The capacity of the machine reaches 300-1200 caps per hour.
CL-1200 ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် အဖုံးတွေကို အော်တို သယ်ဆောင်ပေးပြီး VAQGF 300 စက်ရဲ့ အဖုံးတပ်ဆင်ပေးတဲ့ယူနစ်ကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒီစက်မှာ အဖုံးတွေတင်ဖို့ လင်ဗန်းတစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေက အဖုံးတွေကို လင်ဗန်းထဲထည့်တဲ့အခါ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ မော်တာက အဖုံးကို အဖုံးတပ်ဆင်ပေးတဲ့ ကိရိယာနေရာသို့ ထားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ခေတ်မီတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် စက်ကအဖုံးတွေကို နေရာမှန်မှာ အော်တိုတပ်ဆင်ပေးနိုင်တယ်။ ဒီစက်က တစ်နာရီလျှင် အဖုံး ၃၀၀ မှ ၁၂၀၀ အထိ တပ်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(အျောတို အဖုံးသယျပေးသောစကျ CL-1200 ၏ အသေးစိတျ ဖျောပွခကျြမြား)
Capacity (cap / h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 300-1200
Power (kw) (ပါဝါ) 0.18
Dimensions (LxWxH) (အတိုင်းအတာ) 600*600*3000
Weight / kg) (အလေးချိန်) 65
With this device, the establishments producing 20-litre jars of water can check the probability of the jars of there is any strange things after filling and capping.
DJ-100 light inspection is designed with2lights andaframe to protect the scanner. This light inspection is located just behind the position of the 3-in-1 jar filling machine VAQGF300. Almost 100% of customers, after purchasing the automatic jar filling and capping machine 300 20 liter jars /h will buy this DJ-100 light inspection.
ဒီစက်က ပုလင်းတွေကို လောင်းဖြည့်ပြီး အဖုံးတပ်ဆင်ပေးပြီးတဲ့အခါ ပုလင်းထဲတွင် အခြားအရာဝတ္ထုများ ရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီစက်ကို မီးသီး ၂ လုံးနှင့် scanner ကို ကာကွယ်ဖို့ ဖရိန်တစ်ခုနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ DJ-100 စက်ကို VAQGF 300 စက်ရဲ့ အနောက်ဖက်နားမှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ VAQGF 300 စက်ကို ဝယ်ယူပြီးတဲ့ customer ၁၀၀ % နီးပါး ဒီစက်ကို ဝယ်ယူမှာ သေချာပါတယ်။
(အလင်းဖြင့် စစ်ဆေးပေးသောစက် DJ-100 ၏ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များ)
Power (w)(ပါဝါ)3x 20w
Dimensions (LxWxHmm)(အတိုင်းအတာ) 600x200x1000
6. Steam Jar Membrane Shrinking Machine (SK-300)
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့သွားစေသောစက် (SK-300)
With the design of 1 boiler, 1 jar shrinking chamber, the SK-300 steam jar membrane shrinking machine will be an effective assistant for bottled drinking water production facilities today.
The boiler is used to supply steam to the shrinking chamber throughapipeline system. The water jars, after being filled with capped water and checked throughalight inspection, it will be transferred via plastic conveyor system. Workers will place the polymer film into the jar and transfer it to the shrinking chamber. At the shrinking chamber, the heat of the steam will make the membrane stick to the jar, the jar will then be moved to the expiry date printing unit and delivered to the market.
When using the SK-300 steam jar membrane shrinking machine provided by Viet An, we commit that the shrink membrane will not wrinkle.
ဒီစက်မှာ ရေနွေးအိုး ၁ လုံးနဲ့ ရှုံ့ပေးတဲ့အကန့်ပါတာကြောင့် ယနေ့ခေတ် ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အထောက်အကူပြုမှာ သေချာပါတယ်။
ရေနွေးအိုးဟာ ပိုက်လိုင်းစနစ်ကိုဖြတ်ပြီး ရှုံ့ပေးတဲ့ အကန့်ထဲကို ရေနွေးငွေ့လွှတ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆေး၍ရေဖြည့်ထားသော ရေပုလင်းများကို ပလပ်စတစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်မှတဆင့် ရွှေ့ပြောင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေက ပေါ်လီမာဖလင်တွေကို ပုလင်းထဲသို့ထည့်ပြီး ရှုံ့ပေးတဲ့အကန့်ထဲ ရွှေ့ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ ရှုံ့ပေးတဲ့အကန့်မှာ ရေနွေးငွေ့ရဲ့ အပူက အလွှာပါးကို ရေပုလင်းကို ကပ်စေမှာ ဖြစ်တယ်။ ထို့နောက် ပုလင်းကို သက်တမ်းကုန်တုံးတဲ့ရက်စွဲ ရိုက်နှိပ်တဲ့ ယူနစ်ဆီသို့ပို့မယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ ဈေးကွက်သို့ ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။
Viet An မှ SK-300 ကို ဝယ်ယူသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် membrane က ရှုံ့မသွားဘူးဆိုတာ အာမခံပါတယ်။
Specifications of Shrinking machine steam generator (SK-300)
Capacity (jar / h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 100-300
Power(kw) (ပါဝါ) 18
Size (LxWxHmm) (အရွယ်အစား) 1500x550x800
7. Heat jar membrane shrinking machine (SK-300E)
အပူဖြင့်ပုလင်းအလွှာကိုရှုံ့စေသောစက် SK-300 E
Many manufacturing facilities do not want to use steam to shrink the jar membrane. Viet An will offer you another option: SK-300 heat jar membrane shrinking machine. The operating capacity of the machine from 100 to 300 jars per hour.
Instead of using steam to shrink films like the SK-300 steam shrink film machine, the SK-300E machine uses heat to shrink the film. The machine has the ability to automatically adjust the heat, always keepingaconstant heat level in the shrink chamber, so you can be assured of the machine's ability to shrink the membrane.
SK-300 E က ဖလင်ကို ရှုံ့ဖို့ အပူကိုသုံးပါတယ်။လုပ်ငန်းအများစုက ပုလင်းအလွှာကိုရှုံ့ဖို့ ရေနွေးငွေ့ကို အသုံးမပြုချင်ကြဘူး။ဒါကြောင့် Viet An မှ အပူဖြင့်ရှုံ့တဲ့စက်ကို ရွေးချယ်ဖို့ ပေးထါးပါတယ်။
ဒီစက်ဟာ တစ်နာရီလျှင် ပုလင်း ၁၀၀ မှ ၃၀၀ ထိ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီစက်က အပူကို ထိန်းညှိပေးပြီး ရှုံ့ပေးတဲ့အကန့်ထဲမှာ အပူလယ်ဗယ်ကို ကိန်းသေဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့် အလွှာကို ရှုံ့ဖို့ ဒီစက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို ယုံကြည်လို့ ရပါတယ်။
Technical specifications of heat jar shrinking machine SK-300E
Size (LxWxHmm) (အရွယ်အစား)
8. Plastic conveyor for empty jars CSG-6.
ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလပ်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CSG-6
The use of the conveyor is automatic conveyor movement, this machine does not take up space, installation space, and does not require labor. When you buy VAQGF300 automatic filling machine of Viet An company, you can refer to this additional investment of plastic conveyor system. Plastic conveyors are durable, and the investment cost is very reasonable. With this plastic conveyor CSG-6, you will savealot of labor costs.
Note: The plastic conveyor CSG-6 is only suitable for empty jars.
ဒီစက်က အော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးပြီး တပ်ဆင်ဖို့နေရာ အများကြီး မလိုသလို အလုပ်သမားလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ Viet An မှ VAQGF 300 ကို ဝယ်ယူပြီးလျှင် ဒီစက်ကိုလည်း ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ ဒီစက်တွေဟာ ကြာရှည်အသုံးခံပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေလည်း အများကြီး မကုန်ပါဘူး။ဒီစက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အလုပ်သမား ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါတယ်။
*မှတ်ချက်-CSG-6 ဟာ ပုလင်းလွတ်တွေအတွက်ပဲ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
(ပလပ်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CSG-6 ရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Power(kw) (ပါဝါ) 0.55
Size (LxWxHmm) (အရွယ်အစား) 6000x290
304 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ CSSG-5
Withasize of 5000x290 conveyors can move the jar full of water without labor, without losing installation area.
Stainless steel conveyor CSSG-5 is designed to include motorized conveyor system and 304 stainless steel conveyor.
You can connect the CSSG-5 stainless steel conveyor to the back ofaVAQGF300 3-in-1 jar filling machine to createahigh-performance, automatic jar filling line.
5000×290 အရွယ်အစားကြောင့် ဒီစက်တွေဟာ အလုပ်သမားမပါဘဲ ရေအပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ ပုလင်းတွေကို သယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
CSSG-5 ကို မော်တာပါတဲ့ သယ်ယူပေးတဲ့စနစ်နဲ့ 304 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
လုပ်ဆောင်မှုမြင့်မားပြီး အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့လိုင်းကို ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင် CSSG-5 စက်ကို VAQGF 300 စက်ရဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာ တပ်ဆင်ရပါမယ်။
(အစွန်းခံသံမဏိသယ်ယူကိရိယာ CSSG-5 ရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Power(kw)( ပါဝါ) 0.75
Size (LxWxHmm) (အရွယ်အစား) 5000x290
10. 5G Semi-brusher machine BS-2
5 Gတစ်ဝက်ဘရက်ရှ် စက်( BS-2)
This is another suggestion that Viet An would like to send to customers so that you can integrate with the VAQGF300 jar filling machine.
With the design of2decapping heads, the wash chamber hasaneck brush system, jar body and jar bottom. The machine to clean and remove the 20-liter BS-2 jar cap will be another perfect choice for customers
After customers have to collect purchased the jars, they can use the BS-2 machine to remove the cap and wash away any dirt attached to the jar.
5 Gတစ်ဝက် brusher စက်( BS-2)
ဒီစက်ကတော့ VAQGF 300 စက်နဲ့တွဲသုံးဖို့ Viet An မှ နောက်ထပ်အကြံပြုချင်တဲ့စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစက်မှာ ပုလင်းခေါင်းမှာ brush တစ်ခု နှင့် ကိုယ်ထည်နဲ့အောက်ခြေကြားမှာ brush တစ်ခု ပါဝင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီစက်ရဲ့ သန့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့ ၂၀ လီတာ BS-2 ပုလင်းအဖုံးကို ဖယ်ပေးခြင်း တွေကြောင့် customer တွေရဲ့ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အသုံးပြုပြီးတဲ့ ပုလင်းတွေကို စုဆောင်းပြီးတဲ့အခါ customer တွေက BS-2 စက်ကို အဖုံးတွေခွာဖို့နဲ့ ပုလင်းမှာကပ်နေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ဆေးကြောဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Specifications of 5G Semi-brusher machine BS-2
(5 G တဝက် ဘရက်ရ်ှစက်ရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Power(kw) (ပါဝါ) 1.9
Size (LxWxHmm) (အရွယ်အစား) 770x1250x1150
Viet An - the No. 1 supplier of automatic jar filling and capping machines in Vietnam
Viet An- ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ No. 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက် supplier
With nearly 20 years of construction and development, Viet An General Trading Joint Stock Company is proud to be the No. 1 enterprise in Vietnam in importing and manufacturing all kinds of automatic bottling filling machines withacapacity of 100 jars 20L / h to 1200 jars 20L / h
We are committed to ensuring that all types of machines supplied by Viet An ensure ISO 9001: 2015 quality standards, genuine with the cheapest price in the market.
အနှစ် ၂၀ နီးပါး ဆောက်လုပ်ရေးတိုးတက်မှုအရ Viet An ကုမ္ပဏီသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ တစ်နာရီအတွင်း ၂၀ လီတာ ဘူး ၁၀၀ မှ ၁၂၀၀ အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်တွေကို ထုတ်လုပ်တင်သွင်းတဲ့နေရာမှာ No.1 ဖြစ်ပါတယ်။
Viet An ကုမ္ပဏီမှ စက်အားလုံးက ISO 9001:2015 စံချိန်မီပြီး စစ်မှန်၍ ဈေးနှုန်းချိုသာသော ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါတယ်။
Viet An ကုမ္ပဏီမှာ ဈေးဝယ်ဆိုလျှင် ကြာရှည်အသုံးခံတဲ့ အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
Coming to Viet An, you will be owning an automatic, modern jar filling machine line with high durability.
Viet An ကုမ္ပဏီကိုသာ လှမ်းခဲ့ပါ။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ကြာရှည်အသုံးခံတဲ့ ခေတ်မီသော အော်တိုလောင်းဖြာ့်စက်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
Some Viet An's Cups have been achieved ကုမ္ပဏီမှ ဆွတ်ခူးခဲ့သော ဆုအချို့)
Specifications of 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine VAQGF300 (Must be buyed)
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 300 ရဲ့ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine VAQGF300 (Must be buyed)
၂၀ လီတာပုလင်းတွေကိုလောင်းဖြည့်ပေးသော VAQGF 300 ရဲ့ ဝယ်ယူရမည့်အဆင့်များ
Extraction head(ထုတ်ယူသောခေါင်း) 250-300
Head swirled(လည်ပတ်သောခေါင်း) 2
Power capacity (kw/h)( ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 9
Pressure (Mpa) (လေဖိအား) 0.5-0.6
Size (D*R*Cmm)( အရွယ်အစား) 4300x1650x2110
Weight (Kg) (အလေးချိန်) 780
SEPARATE PURCHASE STAGE INTEGRATED INTO A3IN 1 JAR FILLING MACHINE VAQGF300
၂၀ လီတာပုလင်းတွေကိုလောင်းဖြည့်ပေးသော VAQGF 300 ရဲ့ ဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည့် အဆင့်များ
1.BG-600 automatic cap decapping machine(အော်တိုအဖုံးခွာပေးသောစက် BG-600)
2. ST-300 Automatic jar washing machine(အော်တိုပုလင်းသန့်ရှင်းပေးတဲ့စက် ST-300)
3. BL-300 Automatic jar loading machine(အော်တိုပုလင်းသယ်ဆောင်ပေးတဲ့စက် BL-300)
4. CL-1200 Automatic cap loading(အော်တို အဖုံးသယ်ပေးတဲ့သက် CL-1200)
5. DJ-100 light inspection (အလင်းဖြင့်စစ်ဆေးပေးတဲ့စက်(DJ-100)
6. SK-300 Shrinking machine steam generator(ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့သွားစေသောစက် (SK-300)
7. SK-300E heat jar shrinking machine(အပူဖြင့်ပုလင်းအလွှာကိုရှုံ့စေသောစက် SK-300 E)
8. CSG-6 plastic conveyor(ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလပ်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CSG-6)
9. CSSG-5 Stainless steel conveyor for water jar containing(304 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ CSSG-5)
10. 5G Semi-brusher machine BS-2(5 Gတစ်ဝက် brusher စက်( BS-2)
Hỏi đáp & đánh giá3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 300